Fitantanam-panjakana sy fiainam-bahoaka : nokianin’ny FFKM mafy ny mpitondra fanjakana | NewsMada
Taorian’ny hetsiky ny mpianatra: voaroba ireo mponina sy ireo mpivarotra eny Vontovorona
Université de Toamasina: Conscient Zafitody limogé
Fitantanam-panjakana sy fiainam-bahoaka : nokianin’ny FFKM mafy ny mpitondra fanjakana
Par Taratra sur 28/11/2017
“Efa maro ny fanairana natao tamin’ny Komity foibe faha-38 sy 39. Kanefa toa mitoriteny an-tany efitra ny FFKM, ka mila fiovam-penitra mahery vaika ny fitondrana ny firenena. Fitaka sy lainga marivo tototra no iainana, ka very fanahy mbola velona ny vahoaka malagasy maro anisa.” Io ny fanambaran’ny FFKM, afakomaly, tamin’ny fivorian’ny Komity foibe faha-40 tany Antsirabe, ny 23-26 novambra. Manao sonia izany ireo filoham-piangonana efa-tonta eo anivon’ny FFKM.
Herintaona lasa, voalazan’ny fanambaran’ny Komity foibe faha-39, tany Toamasina, fa ny tsy fanatanterahana ireo fehinkevitry ny fampihavanam-pirenena, mifototra amin’ny “F” efatra: fiaiken-keloka, fibebahana, fahamarinana, fihavanana, natao ny 28-30 avrily sy ny 1-2 mey, no miteraka ny tsy fandriampahalemana, ny fahalovana, ny fihanaky ny zava-mahadomelina…
Rakotry ny kolikoly ny fiainam-pirenena
Noho ny kolikoly, tsy hita ny fiafaran’ny fitsarana ny fanondranana tsy marina ny harem-pirenena. Rakotry ny kolikoly ny fiainam-pirenena manontolo: lasan’ny hafa ny tanin-drazana, lasan’ny vahiny ny tany. Mihamafy ny tsy fandriampahalemana sy ny fahantrana. Mihamafy ny fiatrehana ny asan-dahalo, mampiasa fitaovam-piadiana avo lenta no ho ny an’ny mpitandro filaminana.
Mihena ny vokatra amin’ny lafiny rehetra, ary midangana ny vidim-piainana. Lasa tantely afa-drakotra ny firenena, ary lasa tompony mangataka atiny ny Malagasy. Tsy mangarahara ny fifanarahana ara-barotra iarahana amin’ny vahiny. Manome vahana ny vahiny ny fanjakana amin’ny fandraharahana, ka lasa ny vahiny indray no mahazo fanampiana. Tsy mangarahara ny fandraisana ny volam-panjakana, ka lasa mifangaro amin’ny asan’antoko.
Mila fitaizana ny olom-boafidy sy olom-boatendry
Eo anatrehan’izany, mangataka amin’ny mpitondra ny FFKM mba hihaino ny feon’ny fiangonana na maharary aza izany ka hamaha olana, hanome vahaolana, ary hanome maridrefy amin’ny fanatanterahana azy.
Vahaolana arosony ny fananganana aomoneria manokana hitaiza ny olom-boafidy sy olom-boatendry isan’ambaratonga, ny fiantsoana ny zanaky ny fiangonana hanao dina fampandrosoana ny firenena. Eo koa ny fanomezan-danja ny mpanabe sy ny teknisianina, ny fampirisihana ny mpitandro filaminana hanitsy ireo diso lalana ao aminy, ny tsy hanaovan’ny fanjakana dika mitovy ny lalàna any ivelany. Mila fanorenana ifotony ny rafitra rehetra eto amin’ny firenena.
Mba hahay hihaino sy handinika izany ve ny mpitondra? Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino!
JESS ERNESS sy TENCE MENA: hamoaka clip “Ampiadaniko” 04/03/2021
Electric Vocuhila: vahiny mitrandraka ny tsapiky 04/03/2021
Rallye any Frantsa: handray anjara amin’ny P.208 Rally cup i Hugo 04/03/2021
Karate-Afrika Kumite: hatao any Egypta raha tsy misy ny sampona 04/03/2021
Kitra – Fifidianana ho filohan’ny Caf: ho sarotra ny haha kandidà an’i Ahmad 04/03/2021